တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel)အမႈေဆာင္ရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Nguyen Thanh Nam အား ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးညိဳေစာႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔ေဆြ တုိ႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္တုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ လုိင္းမ်ားတပ္ဆင္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္တုိ႔သည္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၿပီး စုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၾကသည္။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel)အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Mr. Nguyen Thanh Nam အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောနှင့် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန့်ဆွေ တို့တက်ရောက်ကြပြီး Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်နှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ ပြည်သူများအား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် အင်တာနက် လိုင်းများတပ်ဆင်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ကျေးလက်ဒေသများအထိ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၈ Admin 0